Madaxweyne Siilaanyo oo Ku Waajahan Gobolka Sool – Goobjoog News
Madaxweynaha maamulka Somaliland Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa u safray magaalada Laascaanood ee gobolka Sool si uu halkaasi xarigga uga soo jaro bilawga diiwaangelinta codbixiyeyaasha gobolka sool oo 23 bishan ka bilaabmaysa deegaannada Sool.
Safarkan madaxweynaha oo ay ku wehliyaan xubno wasiirro ah uu ka mid yahay wasiirka madaxtooyada Maxamuud Xaashi Cabdi, ayaa saaka aroortii hore ka ambabaxay magaalada Hargeysa.
Gobolka Sool ayaa noqonaya kii ugu dambeeyey ee diiwaangelinta cod bixiyeyaasha doorashadu ka qabsoomayso, iyadoo sidoo kale uu yahay gobolka kaliya ee madaxweyne Siilaanyo uu furay diiwaangelintiisa. Tagitaanka madaxweyne Siilaanyo ee Sool ayaa waxay ka mid ahayd qodobo bishii hore dhamaadkeeda ay soo hordhigeen masuuliyiin ka tirsan maamulka Khaatumo oo wadahadal heshiis ah la yeelatay masuuliyiin ka socotay Somaliland.
Deegaanada diiwaangelinta Sool la sheegay inay ka dhici doonto ayaa waxa ka mid ah Buuhoodle, oo uu hadda safar ku joogo wasiirka caafimaadka Somaliland Dr. Saleebaan Xaglatoosiye waxaana Buuhoodle ku sugan sidoo kale xubno ka tirsan maamulka khaatumo iyo madax dhaqameed si adag uga soo horjeestay wada hadalkii khaatumo iyo Somaliland.
Askar Ka Tirsan Dowladda Federaalka Oo Ku Geeriyootay Qarax Ka Dhacay Degmada Afgooye
Mareykanka: Maxkamad Xukun Ku Riddey Dhallinyaro Soomaaliyeed
Guddiga Madaxa banaan Ee Xaduudaha Oo Ku Baaqay In Si Degdeg Ah Wax Looga Qabto Arrinta Beled-xaawo
Pxuizj dyemus Viagra when will cialis be generic
Eojftm rnrsty viagra generic cialis pill
Vxyrmg gzgimt Buy viagra online online pharmacy